सबै पहाडिया शासक होइनन् « Khasokhas
सबै पहाडिया शासक होइनन्
सुरेन्द्र चौधरी /
नयाँ संविधानमा थारु समुदायका मुद्दाको विषयमा केही असन्तुष्टि छन् । त्यसलाई भोलिका दिनमा सच्चाउने र सुधार्ने ठाउँ धेरै छन् । २००७ सालको क्रान्ति होस् या २०४६ सालको राजनीतिक सुरुवातसँगै ०६२÷०६३ को जनआन्दोलन होस् वा माओवादीको जनयुद्ध र संघर्षलगायत विभिन्न समुदाय थारुहरुले गरेको आन्दोलन जनजाति र मधेसीहरुले गरेका विभिन्न आन्दोलनको देनकाकारण यो संविधानआएको हो ।
पहिलो संविधानसभाले विभिन्न क्षेत्र,भाषा, संस्कृति र समुदायको सहभागिता र अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न संविधानसभाको चुनाव भएको थियो । पहिलो संविधानसभा र अन्तरिम संविधानले दिएका अधिकारहरु अहिले संविधान आउँदा कटौती भएर आएका छन् भने केही धेरै राम्रा कुराहरु पनि आएका छन् । यद्यपि यो संविधानबाट थारु र मधेशी समुदाय खुसी छैनन् ।
थारुहट आन्दोलन नयाँ संविधान नमान्ने आन्दोलन होइन । जुन समुदाय सड्कमा छ त्यो समुदायले आफ्नो उपस्थिति देखाएर नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने इच्छा र आकांक्षा जाहेर गरेको हो, त्यसका लागि यो समुदाय अहिलेकै संविधानमा टेकेर अन्य अधिकार प्राप्त गर्नुको अन्य विकल्प छैन् ।
नयाँ संविधान त जारी भयो अब त्यसलाई लागू कसरी गर्ने? नयाँ शक्तिमा आउनुपूर्वलामो समयदेखि संयुक्त राष्ट्र संघ र विश्व बैंकमा काम गर्र्दाका अनुभवहरुलाई हाम्रो देशमा लगानी गर्न सकिन्छ ।
देश भएका विभिन्न आन्दोलनका कारण विकास हुन सकेको सत्य हो । आगामी दिनमासंविधानलाई लागू गर्ने र नयाँ बनाउँदै जाने विषय राजनीतिक शक्तिहरुसँग विकल्पहरु के कस्ता छन्? अस्तित्वमा रहेका नेपालका राजनीतिकदलहरुले बिर्सन नहुने कुरा संविधान त जारी भयो सो संविधानले समाजमा विभाजनको रेखा कोरेको छ । नयाँ संविधान जन्माउने आमाको बेहाल छ र अरुले खुसी मनाएका छन् । संविधान छ तर, यसलाई केहीले स्वीकार गरे भने केहीले अस्वीकार गरेका छन् । जुन समाजले संविधान जन्मायो उसैको क्षतविक्षत अवस्था छ । अहिले आउँदा मधेसले पहाड र पहाडले मधेसप्रति सकारात्मक भन्दा नकरात्मक दृष्टिले हेर्ने अवस्था पैदा सृजना भएको छ ।
यसरी हेर्दा संविधान लागू गर्नुपर्ने पनि छर विभाजित मानसिकतालाई जोड्नुपर्ने मुख्य दायित्व पनि हाम्रो अगाडि छ । जुनकुरा वर्तमान राजनीतिक दलहरुबाट सम्भव छैन र देखिंदैन ।
विगत ३० वर्षदेखि पुराना राजनीतिक दलहरुको पालैपालो शासन देखिरहेका छौं । कुनै पनि परियोजना वा मिसनको परीक्षण काल भनेको कम्तिमा पाँच वर्ष चाहिन्छ । यो अवधिमा त्यसका कमजोर र सवल पक्षहरुलाई पहिचान गरी नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने मार्गनिर्देशनहरु दिने गर्दछ । तर हामीले अहिलेका राजनीतिक दलहरुलाई विगत ३० वर्षदेखि हेरिरहेका छौं । तिनीहरुमा बन्ने र सुध्रिने कुनै संकेतहरु देखिने ठाउँ छैन ।
यति लामो समयभन्दा उनीहरुलाई कतिसमय दिने र हेर्ने ? त्यसकारण अब पुराना पार्टी र पुराना तरिकाले सोचेर देशको उन्नति हुँदैन । देशमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति जन्मिएन भने ७० वर्ष लगाएर ल्याएको संविधान अलपत्र पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ । यो संविधान अलपत्र पर्नु भनेको मुलुकमा जनताको बलिदानीबाट जे जति अधिकार प्राप्त भए त्यो पनि गुम्ने सम्भावना बढ्नु हो ।
खासगरी जनजाति, महिला, मधेसीलगायतका उत्पीडित वर्ग समुदायको पक्षमा जेजति हक अधिकार प्राप्त भएका छन् ती सबै खोसिने अवस्थाबाट हाम्रो मुलुक गुज्रिरहेको छ । त्यसकारण यो संविधानमा टेकेर बाँकी अधिकार प्राप्तिका लागि अगाडि बढ्नुको अर्को विकल्पदेखिँदैन ।
अहिलेका ठूला दलहरुले पनि आदिवासी जनजाति मधेसको कुरा सुन्ने देखिएन र क्षेत्रिय पार्टीले देशको नेतृत्व गर्न सक्दैन । त्यसैले देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान र उत्पीडित वर्गको उत्थान गर्नका लागि नयाँ शक्ति देशमा जन्मनु पर्दथ्यो र जन्मियो । यो नेपालीहरुको चाहना हो ।
पुराना पार्टीमा रहेका इमान्दार नेता कार्यकर्ताहरु पनि देश पुरानो तरिका र विचारधाराले चल्दैन भन्नेमा पुगेका छन् ।
हाम्रो देशभन्दा पनि अझ डरलाग्दो तरिकाले ध्वस्त भएका मुलुकहरु संसारमा धेरै छन् । म आफैं पनि द्वन्द्वग्रस्त देशहरुमा काम गरेको अनुभवले पनि भन्न सक्छु कि देशलाई बनाउनु भनेको समाजलाई बनाउनु र आर्थिक समृद्धिको आधार तयार गर्दै सँगसँगै अगाडि बढ्ने हो । यो कुरा राजनीतिक दलहरुबाट मात्रै सम्भव छ ।
संविधान जारीपछि पैदा भएको विभाजित समाज र मानसिकता तोड्ने भन्दा जोड्ने उद्देश्य हाम्रा नेताहरुसँग हुनुपर्ने हो । अहिले देशको साझा लक्ष्य र उद्देश्य नै यही हुनुपर्दछ ।
थरुहट आन्दोलनले नयाँ संविधानमा धेरै अधिकार सुनिश्चित गराउन भूमिका खेलेको थियो । उक्त आन्दोलनबिना यो सम्भव थिएन । फेरि एउटा जात विशेषको मात्र कुराले संविधान बन्ने होइन, यसमा सबैको विषय सम्बोधन हुनुपर्छ ।
पहिलो संविधानसभामा पनि थारु सांसद सदन र थरुहट दुवै मोर्चामा आन्दोलित थिए । उनीहरुको आन्दोलन संविधान जारी हुन नदिनका लागि थिएन, नयाँ बन्ने संविधान सहभागितामुलक होस् भन्ने उद्देश्य थियो ।
चितवनदेखि कञ्चनपुरसम्मका थारुहरु अहिले पनि आन्दोलित छन् । त्यो मुद्दा तत्कालसमाधान हुनुपर्छ । कुनै पनि नीतिगत निर्णय गर्दा सिद्धान्तमा टेकेर गर्नुपर्छ । त्यो गरिएन भने विवादको श्रृंखलाहरु थपिँदै जान्छन् ।
पहिलो संविधानबाट राज्य पुनःसंरचनाआयोगले १० वटा प्रदेशको खाका दिएको थियो । तर मुख्य कुरा भनेको संख्या भन्दा पनि त्यसले निर्धारण गरेको मापदण्ड, सिद्धान्त र आधारहरुलाई मानेर जानुपर्दछ ।प्रदेशमा संख्याको हिसाबले तलमाथि होला । तर, त्यो आयोगले केही आधारहरु दिएको छ । त्यसको आधारमा टेक्दा पश्चिम तराईमा थारु समुदायलाई लक्षित गरेर एउटा प्रदेश बन्छ । त्यो नै अहिलेको समस्या समाधानको उत्तमविकल्प हो ।
पहाडिया शासकको सन्दर्भमा अहिले तराईबासीहरुले सधैं भन्ने गरेको गुनासो यदि सत्य र तथ्य छन् भने पहाड र तराईबासीहरुले स्वीकार्नै पर्नेहुन्छ । त्यो भनेको सबै पहाडीहरु शासक होइनन् तर अर्को पाटोबाट हेर्दा सबै शासक पहाडी मात्र किन भए त ? यसको समुचित जवाफ यो देशले हिमाल, पहाड, मधेस सबैले खोजेको छ । एउटा सत्य र तथ्य कुरा यो देशका सबै शासक पहाडिया हुन् । तर सबै पहाडिया शासक भने होइनन् । सबै शासकहरु पहाडी किन भएन त ! यो अहम् प्रश्न छ । त्यसकारण नयाँ शक्तिले तीन वटा क्लस्टरकोअवधारणा आगाडि सारेको छ । त्यो भनेको खस–आर्य, थारु–मधेसी र मुल तराईबासी र आदिवासी जनजातिहरु हुन् ।
यी तीन क्लस्टरलाई समुचित सम्बोधन गर्न पार्टी र राज्यको संरचनामा समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामुलक बनाउँदै लैजाने हो । यसले धेरै कुराको सम्बोधन अवश्य गर्नेछ ।
सिधा भाषामा भन्दा जतिपनि समानुपातिक सहभागिताको प्रश्न छ त्यसको उद्देश्य भनेको राज्यसत्तामा सबैले हिंसा बराबरी भनेको हो । त्यसलाई नयाँ शक्तिले तीन क्लस्टरमा सम्बोधन गर्ने भनेको छ ।
मधेसी समुदायले पहाडियाहरु सबै शासक भन्ने जुन बुझाई छ त्यो गलत हो । पहाडी शासकहरु हुन् तर, शासकहरुले समुदाय छुट्याउँदैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्दछ ।
२०७२ वैशाख १२ गतेपछि जनता अहिलेसम्म पनि पालमूनि छन् भने पाल च्यातिएर अर्को पीडा भोग्नु परेको छ तर,पहाडिया शासकहरुले के गरे खै ? यदि यो देशका पहाडिया शासकहरु पहाडको कुरा मात्र गर्दथे भने अहिलेसम्म १४ जिल्लाका जनताको अवस्था अर्कै हुने थियो । भूकम्पले विस्थापित भएका १४ जिल्लाका जनता अहिलेसम्म पालमूनि किन छन्? उनीहरु पानी पर्दा शिरलुकाउने छानो पाउन सकेनन् छैनन् किन ?यसको जवाफ मधेश र तराईले खोज्नुपर्दछ ।
त्यसैले अब समाज विभाजन होइन,समाजलाई जोड्ने बेला आएको छ । यो भूमिका जनता आफैले खेल्नुपर्छ । जस्तो कि,खससमुदायले मात्रै फाइदा लिएको भए कर्णालीको मान्छे अशिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य समस्या र भोकमरीको शिकार बन्नुपर्ने थिएनन्। हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, खस समुदायको उद्गम विन्दू भनेको कर्णाली हो । ती कुराले के पुष्टि गर्दछ भने शासकहरुलेसमुदाय हेर्दैनन्, उसको आफ््नै वर्ग हुन्छ । त्यो वर्गभित्र रमाउने जात हो,शासक । शासक समुदाय विशेषको हुँदैन । यस्तो सोच्नु अतिवादी सोँच हो । यसको अर्थ मधेसी र थारु उत्पीडनमा छैनन् भन्ने पट्कै होइन ।
उनीहरुमाथि भएको बहिस्करणलाई दुई किसिमले हेर्न सकिन्छ । एउटा सामुदायिक र भाषिक बहिस्करण र असमानता र अर्को वर्गीय रआर्थिक असमानता हो । यी असमानताहरु हटाउनको लागि नयाँ शक्तिले आर्थिक विकासको समान वितरण भनेको छ । अहिले संसारभरी यो असमानताहरुलाई सम्बोधन गर्न समावेशिक आर्थिक वृद्धि, समावेशी विकास र समावेशी सहभागिताको अवधारणालाई अगाडि सारेको छ ।
जहाँसम्म समानुपातिक सहभागिताको सवाल छ, त्यसलाई समुदायको प्रत्येक सहभागिताबाटै सम्बोधन गर्नुपर्दछ । त्यसकारण पनि नयाँ शक्तिले तीनवटा क्लस्टरको अवधारणा ल्याएको हो । पार्टीहरुमा पनि थारुको सहभागिता र सह–अस्तित्व दुवै खोजेको हो । पहिलो संविधानसभा हुँदै गर्दा विभिन्न क्षेत्रिय, जातिय दलहरु निर्माण भए । त्यसको उचित पुष्टि भएको पनि छ । यदि क्षेत्रीय र जातिय संगठन नभएको भए पनि धेरै प्रगतिशील संविधान आउने थिएन ।
अब संविधान लागू गर्नको लागि जातीय र क्षेत्रीय दलले पहिले गरेको र अहिले गरेका आन्दोलन राज्य सत्तामा बराबरको हिस्सेदारीको लागि हो । त्यो अब क्षेत्रीय पार्टी पार्टीबाट सम्भव छैन । क्षेत्रीय पार्टीले पठाएका प्रतिनिधिले मात्र हुँदैन, त्यसको लागि राष्ट्रिय पार्टीको आवश्यकता छ । अर्कोतिर हिजो नदिने पुराना पार्टीबाट अब पनि दिँदैनन् । ती पार्टीमा गएर समस्या हल पनि हुँदैन । समावेशीभनेको पुराना पार्टीले जातको कुरा मात्र बुझ्दछ ।
जातिय र क्षेत्रिय दलले विगतमा गरेको र अहिले गरेका आन्दोलन राज्य सत्तामा बराबरको हिंस्सेदारीको लागि हो । त्यो अब क्षेत्रीय पार्टीबाट सम्भव छैन । क्षेत्रीय पार्टीले पठाएका प्रतिनिधिले मात्र हुँदैन त्यसको लागि राष्ट्रिय पार्टीको आवश्यकता छ ।
अर्कोतिर हिजो नदिने पुराना पार्टीहरुले अब पनि दिँदैनन् । ती पार्टीमा गएर समस्या हल पनि हुँदैन । समावेशीभनेको पुराना पार्टीले जातको कुरो मात्र बुझ्दछन, नयाँ शक्तिले प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको कुरा उठाएको छ । प्रत्यक्ष लोकतन्त्र सानोभन्दा सानो समुदायलाई महत्व दिन्छ । त्यस हिसाबले थरुहटको जनसंख्याको हिसाबले पनि राष्ट्रिय दल बाहेक अन्य दलले राज्यसत्तामा खोजेको हिस्सेदारी पाउने कुरा मुस्किल छ र विगतका आन्दोलनका माग पूरा गराउन पनि एउटा सशक्त राष्ट्रिय दल बनाएरै सम्भव हुन्छ ।
अमेरिकाको गुम्बामा बुद्ध भारतमा जन्मेको प्रचार, पन्तसहितले त्यही पुगेर गरे सच्याउन आग्रह
अमेरिकाको एउटा बुद्धमन्दिरले गौतम बुद्ध भारतमा जन्मिरहेको गलत प्रचारवाजी गरिरहेको भेटिएपछि अमेरिका भ्रमणमा रहेका भैरहवाका
हत्या आरोपमा सांसद आलमलाई थप ५ दिन थुनामा राख्न अनुमति
बम विस्फोटका घाइतेको हत्या आरोपमा पक्राउ परेका सांसद तथा पूर्वममन्त्री मोहम्मद अफताव आलममाथि अनुसन्धान गर्न
भ्रमण वर्ष (२०२०) सफल बनाउन एनआरएनएसँग १७ बुँदे समझदारी
२० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने लक्ष्यसहित सुरु हुन लागेको नेपाल भ्रमण वर्ष (२०२०) सफल बनाउन
भाइटीकाको शुभ साइत ११: ५५ मा
नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले यस वर्षको भाइटीकाको शुभ साइत सार्वजनिक गरेको छ । समितिले तिहारका
१० सुन्दर तस्वीर जसले तपाईलाई 'कहिले मुक्तिनाथ जाउँ' बनाउनेछ